Caalamka, 01 December 2018
Sabti 1 December 2018
May oo dilka Khaashuqji kala hadlaysa Bin Salman
Ra’iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dilkii magaalada Istanbul loogu geystay wariye Jamal Khaashuqji, ay kala hadli doonto dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Mohamed Bin Salman.
Ukraine oo dalbatay ciidamada NATO
Madaxweynaha dalka Ukrain Petro Poroshenko ayaa weydiistay Isbaheysiga NATO in ay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda Azov.
Xiisad ka dhex oogan Ukraine iyo Ruushka
Ruushka ayaa maanta sheegay in go’aanka Ukraine ay kusoo rogeyso xukun milatari ay hogaamin karto inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee Bariga dalka Ukraine.
Midowga Yurub oo Ogolaaday Qorshaha ka Bixista Britain.
Hoggaamiyayaasha 27-ka waddan ee Midowga Yurub ayaa ansixiyey heshiis ay dalka Biritan kaga baxayso Midowgaasi, isla markaana u gogol-xaaraya nooca iskaahsiga ay mustaqbalka yeeelan doonaan labada dhinac.
Qunsuliyadda Shiinaha ee Karachi oo la weeraray
Rag hubeysan ayaa maanta weeraray qunsuliyadda uu Shiinaha ku leeyahay magaalada Karachi ee dalka Pakistan.
Madaxii sirdoonka GRU ee Ruushka oo geeriyooday
Madaxa hay’adda sirdoonka milatariga Ruushka ee GRU, oo horey loogu eedeeyey faro-gelinta doorashadii Mareykanka ee 2016 ayaa ku geeriyooday Moscow.
Shir Ganacsi oo Turkiga ka Dhacay
Magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga waxaa lagu qabtey shir ay kasoo qeybgaleen sideed Kun oo qof oo meelo kala duwan oo dunida ah ka tagey. Shirkadaha kala duwan ee dalkaasi Turkiga ayaa kulankaasi ku soo bandhigay Alaabaha ay sameeeyaan ee ay aduunka u iib geeyaan.
85,000 oo carruur ah oo ku dhintay dagaalka Yemen
Qiyaastii 85,000 oo ah carruur da’doodu ka hooseyso 5 jir, ayaa laga yaabaa inay cudurro iyo gaajo ugu dhinteen dalka Yemen, tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka billowday dalkaas, sanaddii 2005, waxaa sidas maanta sheegtay hay’ad caalami ah.
Mareykanka oo Baaq u Diray Interpol
Xilli lagu wado in maanta ay magaalada Dubai ka dhacdo doorashada guddoonka sare ee Hey’adda Booliska Caalamiga ah ee Interpol, ayay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday in ay ayyiday Kim Jong Yang oo u dhashay dalka Kuuriyada Koofureed, kana mid ah musharraxiinta xilka madaxweynaha Interpol.
Dagaal dib uga qarxay magaalada Xudayda
Dagaal ayaa Isniintii dib uga qarxay magaalada dekedda leh ee Yemen ee Xudayda xilli ay socdaan dadaallo ku wajahan sidii xabad joojin loo gaari lahaa.
Sacuudiga oo dil la raba "dadkii dilay Khaashuqji"
Dacwad oogaha guud ee Sacuudiga ayaa codsaday in ciqaab dil lagu xukumo shan qof oo la sheegay in lagu tuhmayo dilka suxufi Jamaal Khaashuqji.